Unxenxa ukungadembeseli kozakwabo owoSuthu - Impempe
Unxenxa ukungadembeseli kozakwabo owoSuthu
Uma AmaZulu FC ezogcina ekufezile asezibekele ukuthi afuna ukukuzuza kule sizini, kuzomele aqhubeke aqoqe amaphuzu agcwele kuyo yonke imidlalo esele. Lokhu kuvezwe ngumdlali waleli qembu laseThekwini, uLuvuyo Memela ngesikhathi ekhuluma ngomdlalo wabo olandelayo.
Usuthu luzoshikilisana neBlack Leopards emdlalweni weDStv Premiership eThohoyandou Stadium ngeSonto ntambama, kanti uMemela uthi kumele bawunqobe lo mdlalo. Egcina ukuhlangana lamaqembu, Usuthu kwabuya lububula selushayiwe emdlalweni weNedbank Cup.
“Wumdlalo obaluleke kakhulu lona ngoba siyazi ukuthi yini esihlose ukuyizuza,” kusho uMemela. AmaZulu asenyuke aze afika endaweni yesihlanu kulogi kanti asilele ngamaphuzu ayisithupha kwiMamelodi Sundowns okuyiyona eqhwakele.
Yize kubukeka kunzima, kodwa Usuthu lusangangena emjahweni wesisicoco seligi futhi indlela adlala ngayo iyathembisa ukuthi azozuza ngaphezulu kwendawo yesine abekelwa Yona ngumphathi wawo uSandile Zungu ekuqaleni kwesizini.
“Indlela ezosenza sifike kule ndawo esifuna ukufika kuyo wukuthi kumele sifake wonke amandla kuyo yonke imidlalo esiyidlalayo.
“Umqeqeshi uhlale esikhumbuza ukuthi into eseyenzekile seyisemuva, seyidlulile, akusekho ongakwenza ngayo. Ngakho into ebalulekile ukuthi singabadlali siyayazi into esiyifunayo, futhi ngiyabona nje ukuthi sesiwulungele lo mdlalo,” kuqhuba uMemela.
“Okubalulekile wukuthi singacabangi kakhulu ngomdlalo esesiwudlalile la iLeopards yasishaya khona kwiNedbank Cup. Esikubhekile manje wukuthi siwole amaphuzu amathathu kulo mdlalo ozayo. Uma sifuna ngampela ukuwina, sizowina ngoba kulele kithi ukuthi sizinikela kanjani emdlalweni,” kuchaza lo mdlali obekwi-Orlando Pirates phambilini.
Previous Previous post: Ifaniswe neLiverpool iSundowns ngumqeqeshi we-Al Hilal
Next Next post: IChiefs ivuthele izinsolo ngekusasa likaZuma